को हुन् रविना वादीलाई आश्रय दिने यी व्यक्ति? (भिडियो) « Sajhapage24
को हुन् रविना वादीलाई आश्रय दिने यी व्यक्ति? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: July 25, 2018
भक्तपुर । काठमाडौँको सामाखुशीमा २०६९ सालबाट संचालित मानव सेवा आश्रम पिडामा परेका व्यक्तिहरुको लागि सहाराको केन्द्र बनेको छ। यस मानव सेवा आश्रममा करिब ६० जना व्यक्ति रहेका छन्। वेसहारा तथा सडकलाई ओछयान मान्न बाध्य व्यक्तिहरुको लागि यो मानव सेवा आश्रम सहारा बन्दै आएको छ। अशक्त र मानसिक रोगी नागरिकको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको मानव सेवा आश्रमले प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको छ ।
उनी भन्छन,’डाक्टर, इन्जिनियरभन्दा पनि एउटा सच्चा समाजसेवीको खाँचो छ।’ मानव सेवा आश्रम विभिन्न क्षेत्रमा रहेकोले इच्छुक व्यक्तिले नजिकको आश्रममा उनले निमन्त्रणा दिनुको साथै मानवताको प्रवर्दनको महाअभियानमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध व्यक्त गरेका छन्। बाँकी हेर्नुहोस भिडियोमा :भक्तपुर : काठमाडौँको सामाखुशीमा २०६९ सालबाट संचालित मानव सेवा आश्रम पिडामा परेका व्यक्तिहरुको लागि सहाराको केन्द्र बनेको छ। यस मानव सेवा आश्रममा करिब ६० जना व्यक्ति रहेका छन्। वेसहारा तथा सडकलाई ओछयान मान्न बाध्य व्यक्तिहरुको लागि यो मानव सेवा आश्रम सहारा बन्दै आएको छ। अशक्त र मानसिक रोगी नागरिकको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको मानव सेवा आश्रमले प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको छ ।